गोविन्द गौतमलाई गोली ठोक्ने भारतीय एसएसबीको खुलासा – Hello Punarwas
२०७५ माघ ६, आइतवार
कञ्चनपुर गोली काण्डबारे हेल्लो पुनर्वासको स्थलगत रिपोर्ट
रञ्जित लामा ।
२०५४ सालमा तत्कालिन ९ वटा वाम (कम्युष्टि) पार्टीहरुले राष्ट्रघाती भन्दै महाकाली सन्धी र कालापानीमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएकोप्रति विरोध गरे । विरोधमा हजारौं नागरिक सकडमा आए । सरकारले त्यो जनसागर थेग्न सकेन । प्रर्दशनमा गोली प्रहार भयो । कयौं घाइते भए । त्यही आन्दोलनलाई झ्यालबाट हेरिरहेकी थिइन १२ वर्षिया बालिका सम्झना दाहाल । प्रहरीको गोली लागेर उनको ज्यान गयो । फेरि पनि त्यस्तै घटना दोहोरिएको छ, कञ्चनपुरमा । तर, त्यो घटना र यो घटनाको बीच केही फरक छ । यतिबेला नेपाली नागरिक भारतीय प्रहरीको गोलीबाट मारिएका छन् ।
कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को टोलीले चलाएको गोलीबाट एक नेपालीको ज्यान गएपछि त्यसबारे अनेक अड्कलबाजी गरिए र गरिँदै छन् । तर हेल्लो पुनर्वासले घटनाको अति गोप्य भिडियो र नेपाली नागरिक गोविन्द गौतममाथी गोली चलाउने भारतीय प्रहरी निरीक्षकको तस्वीर फेला पारेको छ ।
गोली हान्ने भारतीय एसएसबीका निरीक्षकलाई स्थानीयबासीले गोप्य रुपमा चिनाइदिएपछि हेल्लो पुनर्वासले उनको तस्वीर लिएको थियो । यद्यपी उनको ‘नेमप्लेट’ भने ढाकीएको छ । स्थानीय र एकजना नेपाली प्रहरीका अनुसार ती भारतीय प्रहरी निरीक्षकले पेस्तोलबाट झण्डै ५ मिटरको दुरीबाट गोली प्रहार गरेका थिए । गोली प्रहारबाट नजिकै रहेका गौतम ढलेका थिए ।
नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमलाई गोली प्रहार गर्ने एसएसबी निरीक्षक (बीचमा)
नेपाल र भारत दुवै तर्फबाट नाराबाजी भइरहँदा भारतीय सीमानामा रहेको सम्पूर्णानगर प्रहरी थानाका प्रहरी निरीक्षकले आफ्नै पेस्तोलबाट चलाएको गोली गौतमलाई लागेको हो । त्यसपछि उनलाई प्राथमिक उपचारका लागि स्थानीय पुनर्वास पोलिक्लिनिकमा लगियो । तर, त्यहाँ सम्भव नभए पछि धनगढीको सिपी अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले गोतमलाई मृत घोषणा गरेका थिए ।
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नं ८ कारगिल डाँडा नजिक नेपाली भुमीमै कल्र्भट निर्माणको विषयलाई लिएर भएको तनावपछि भारतको सम्पूर्णानगर थानाका प्रहरी निरीक्षकले चलाएको गोलीले स्थानीय गोविन्द गौतमको ज्यान गएको हो । २ सय नम्बर पिलर हराएकोले त्यो क्षेत्रमा लामो समय देखि विवाद चल्दै आएको छ ।
नेपाली भूमिमा बन्न लागेको कच्ची कल्भर्ट, जसलाई भारतले आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आएको छ
तर, कल्भर्ट निर्माण स्थल दशगजा भित्र पर्दैन, नक्शा र प्रमाणहरुले त्यो पुर्णतया नेपाली भूमि हो । भारतीय एसएसबीले नेपाली भूमिमै आएर गोली प्रहार गरेका हुन् । फागुन २५ गते बिहीबार बिहान १० बजेतिर नालामा निर्माण भएको कल्भर्टमा माटो भरान गर्दा भारतीय सीमातिर बढी माटो खनिएको आरोपमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र भारतीयले कल्भर्ट भत्काउन खोजेपछि तनाव बढ्दै गएको स्थानीय श्याम परियारको भनाई छ ।
गोलीले यसरी ढले नेपालका गोविन्द गौतम
भारतले नेपाली नागरिकका घरहरु मध्यरातमा भत्काएपछि स्थानीहरु नेपाली भुमीबाटै भारतीय एसएसबीको विरोध गरिरहेका थिए । त्यही भिडमा थिए ३२ वर्षीय गोविन्द पनि । एकाएक भारतीय पक्षबाट गोली चल्न थाल्यो । एक गोली गोविन्दको पेटमा लाग्यो । उनी त्यही ढले । त्यसपछि उनलाई अन्य नेपालीले वोकेर ल्याए, तर त्यत्तीबेलै गोविन्दको प्राण गइसकेको थियो ।
गोविन्दले आफ्ना ७१ बर्षिय बुवा खेमलाल गौतम, आमा हरिदेवी गौतम(६६), धर्मपत्नी सुशीला (२७), नाबालिक छोरीहरु आशिक (१०), आकृति (७), आसुम (२) लाई छाडेर गएका छन् ।
पुनर्वास घटनापछि स्थानीय नेपाली पत्रकार हेमन्त न्यौपानेको बयान
फागुन २६ गतेको कञ्चनपुरको आनन्दबजार घटना नयाँ होइन । पुस्तौँ देखि भारतले नेपालको भूमी हडप्ने प्रयास अझै नरोकिएको मात्रै हो । पश्चिमदेखि पूर्वसम्म भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा ठाउँठाउँमा भारतले सीमा कब्जा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । यसैवर्ष फागुन ०७ गतेका दिन जब हामी नेपालीहरु प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेका थियौँ, तब भारतले कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका ८ आनन्दबजार स्थित कल्भर्ट निर्माण कार्यमा अबरोध पुर्याइरहेको थियो ।
दशगजा क्षेत्र भन्दा करिब २०० मिटर उत्तर (गुगल म्यापले देखाएको नक्सा अनुसार तर ४ दशक पहिले २०० नं. सीमा स्तम्भ हुन्जेल करिब १ किलोमिटरको दूरी रहेको) नेपाली भुमिमा पुनर्वास नगरपालिकाको पाँच लाख रुपैयाँको बजेटमा निर्माण सुरु गरिएको कल्भर्ट निर्माण कार्यमा फागुन ०७ गतेका दिन भारतीय सीमा सुरक्षा बलका प्रहरीले अबरोध पुर्याएका थिए । करिव एक किलोमीटर पर दशगजा क्षेत्र पर्ने भएता पनि सीमा स्तम्भ नभएको भन्दै नेपाली भूमिलाई विवादित बनाइएको छ ।
पुनर्वास नगरपालिकाले भारतीय बजार ओहोरदोहोर गर्न सहज बनाउन सर्वदलीय संयन्त्रबाट बजेट पास गराई सो स्थानमा कल्भर्ट हाल्न लगाइएको थियो । गुगल म्यापमा देखाइएको भुमि भन्दै नेपाली भूमिमा पटकपटक भारतले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । जब ७ गतेका दिन कल्भर्ट निर्माण स्थलमा हतियार सहित आएका भारतीय प्रहरी स्थानीय नेपाली जनता र पत्रकारमाथी हतियार तेर्साएर धावा बोलिरहेको थियो तब नेपाली प्रहरी प्रशासन भने उक्त भूमि हालको लागि विवादित नै रहेको भन्दै तत्काल कल्भर्ट निर्माणबाट पछि हट्नुपर्ने बताइरहेको थियो ।
अन्ततः फागुन आठ गते नेपाल र भारत दुबै तर्फका अधिकारीहरु बसेर छलफल गर्दा उक्त क्षेत्रमा नेपालले कच्ची कल्भर्ट निर्माण गर्न सक्ने तर पक्की कल्भर्ट निमार्ण गर्न नहुने भन्ने भारतको दबाबमा परेर नेपाली अधिकारीहरुले अडान नै लिन नसकि सरासर समर्थन गरे । त्यस लगत्तै कच्ची कल्भर्ट नै भएपनि काम सुरु गरियो । अकस्मात फागुन २५ गते राती ८ः३० बजे हतियार सहित आनन्दबजारमा आएका एसएसबीका जवानहरुले इन्दिरा गुरुङको घरमा पुगेर घर छोड्न भन्दै धम्क्याए र घरमा तोडफोड गर्दै खसीबाख्रा लगायतका अन्य सामग्री लुटेर लगे । त्यतिबेला नेपाल प्रहरीको टोली पनि त्यहाँ पुग्यो ।
नेपाल प्रहरीको अगाडि नै नेपाली सर्वसाधारणलाई भारतीय एसएसबीले गाली गलोज र अपसव्द प्रयोग गरिरहेको थियो । उक्त घटनाको तस्बीर कैद गरिरहेका मेरो घाँटीमा समातेर भारतीय एसएसबीले तस्बीर डिलिट गर्न लगाएको थियो । भारतीय एसएसबीले नेपाली सर्वसाधारणमाथी लाठीचार्ज समेत गरेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् । घटना स्थल पुगेका ईलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभूवनवस्तीका प्रहरी सहायक निरीक्षक रोशन चन्द यसबारे सशस्त्र प्रहरीले जिम्मा लिनुपर्ने भन्दै पन्छिए भने करिब १ घण्टा पछि घटना स्थल पुगेका ससस्त्र प्रहरी सीमा आउट पोष्ट बेलौरीका ससस्त्र प्रहरी निरीक्षक राम बहादुर खत्री समस्या झनझन जटिल भएकाले जिल्लाबाट नै समस्याको सामाधान खोजिनु पर्ने बताएरहेका थिए ।
फागुन २५ गतेको राती त्यस क्षेत्रका स्थानीयले अचयनमा बिताए । भोलीपल्ट फागुन २६ गते विहिबार विहान ९ बजेतिर पुनः हतियार सहित आनन्दबजारमा आएका भारतीय एसएसबी र भारतीय स्थानीय नागरिक तथा नेपाली नागरिकबीच झडप हुन पुग्यो । कुनैबेला नेपाली नागरीकले भारतीयहरुलाई भारतको बसही बजार सम्म खेद्ने त कुनैबेला भारतीयहरुले नेपाली नागरीकलाई आनन्दबजारसम्म खेद्ने कार्य भइरहेको थियो । यो क्रम निरन्तर ३ घण्टासम्म जारी रह्यो ।
घडीमा मध्याह्नको १२ बज्दै थियो । हजारौँ नागरिक र सय भन्दा कम नेपाली सुरक्षाकर्मी नेपालतीर र त्यत्तिकै संख्यामा भारतीय नागरिक र भारतीय सुरक्षाकर्मी भारतीय क्षेत्रमा रहेर ढुंगामुढा गर्दै थिए । अकस्मात भारतीय सुरक्षा फौजले गोली चलाउन थाल्यो । आधा दर्जन जती हवाइफायर लगत्तै माछापुच्छ्रे टोलका स्थानीय गोविन्द गौतमलाई समेत भारतीय सुरक्षा फौजले गोली चलायो । कम्मरमा गोली लागी घाइते भएका गौतमको धनगढी स्थित सिपि अस्पतालमा लैजादैँ गर्दा अत्यधिक रक्त श्रावका कारण बाटोमै निधन भयो ।
भारतीय दूतावासको ‘सफेद ’ झुठ
नेपाली भूमिमा प्रवेस गरी भारतीय सुरक्षा बलले गोली चलाएर एकजना नेपालीको ज्यान गएपनि भारतीय पक्षले त्यसलाई अझैसम्म स्वीकार गरेको छैन । यतिमात्र होइन नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले त यसलाई ठाडो रुपमा अस्वीकार नै गरिदिएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले कञ्चनपुरको पुनर्वासमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को तर्फबाट कुनै फायरीङ नभएको विज्ञप्ती निकाल्दै दाबी गरेको छ ।
दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सञ्चार माध्ययमले बताए जस्तो कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा एसएसबीले फायरीङ गरेको छैन ।’ विज्ञप्तीमा भारतीय क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय निकायलाई त्यहाँ जारी विवादलाई तत्काल सुल्झाउनका लागि काम गर्न पनि भनिएको बताइएको छ ।
नेपाल सरकारले यसबारे गम्भीरताका साथ भारतसँग कुरा गर्न सकेको छैन् । यदि भारतीय एसएसबीले गोली चलाएको होइन भने कसले चलायो ? गोली हान्ने भारतीय एसएसबीलाई स्थानीय नेपाली नागरिकले चिनेको दाबी गर्दै गर्दा भारतले ‘सफेद ’ झुठ बोलिरहेको छ ।
शोकमा सुदुरपश्चिम तर दुख्दैन काठमाडौंलाई
नेपाली युवकको हत्या भएपछि सिङ्गो सुदुरपश्चिम शोकमा छ । तर सीमानामा एउटा नेपाली मारिदा काठमाडौं मौन देखिन्छ । सुदुरपश्चिका ९ ओटै जिल्लामा जनताहरु सडकमा छन् । कालापानी, लिपुलेक, प्याराताल, टनकपुर लगायतमा क्षेत्रमा भारतले गरेको नेपाली भूमि अतिक्रमणबाट सुदुरपश्चिम आक्रान्त हुँदै आएको छ । ५ दिन बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिमको जनजीवन सामान्य वन्न सकेको छैन् ।
गौतमकी पत्नी र उनको परिवार शोकाकुल अवस्थामा
नेपाल र भारत पक्षका अधिकारीबीच पटक पटक स्थिति सामान्य गर्न पहल भएपनि सुदूरपश्चिमको जनजीवन सामान्य हुन नसकेको हो । कञ्चनपुरको दक्षिणी सिमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणमा फैलीएको त्रास हट्न सकेको छैन । दुवै जिल्लाका सिमा नाकावाट आवत जावत सहज हुन सकेको छैन् । होली पर्व मान्न भारतवाट घर फर्किएका सयौं सर्वसाधारण दुवै देशका सिमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका छन् ।
लालपूर्जासहितको नेपाली जमीन भारतको कब्जामा
यतिबेला दशगजामा गोली हानियो भनेर प्रचार गरिदै छ । तर खासमा भन्ने हो भने त्यो क्षेत्र दशगजा होइन । त्यो सम्पुर्ण रुपमा नेपाली भुमी हो । भारतीय एसएसबीले दशगजा भनेर गोली चलाएको स्थानबाट झण्डै २ सय मिटर पुर्वपट्टी नेपाली भुमी छ । त्यो नेपाली भुमीको लालपुर्जा समेत छ । तर ,जमीन भारतको कब्जामा छ । त्यही स्थानमा १ सय ९९ र २ सय १ नम्बर सीमास्तम्भ पनि छ । तर २ सय नम्बर पिल्लर भारतले गायब पारेको छ । त्यसपछि भारतले जंगलमा रहेको रुखलाई दुई देशको सीमा दाबी गर्दै आएको छ । २०३६ सालमा लालपुर्जा पाएपनि २ जना नेपाली किसानको जमीन २०५८ बाट भारतको वन विभागले कब्जा गर्यो ।
स्थानीय करन बहादुर सुनार एक विगाह जमिनका मालिक हुन् । तर, उनीसँग एक विगाह जमिनको लालपुर्जा मात्रै छ, जोत्नका लागि जमिन छैन् । सुनारले १३ वर्षदेखि आफ्नो जमिन उपभोग गर्न पाएका छैनन् । किनकी, उनको जमिन नेपाल–भारत सीमाको पिलर नम्बर २०० नजिकै छ । सो जमिन भारतीय पक्षले आफ्नो देश भित्र पर्छ भन्दै उपभोग गर्न रोकेपछि उनी भूमिहिन बनेका हुन् । विस २०२८ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका सुनारको जमिनको २०३५ सालमा कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारले २०३६ सालतिर जग्गा धनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जा) दिएको थियो । सुनारको जमिन २०५८ सालदेखि भारतीय पक्षले कब्जा गरेपछि उनले जमिन उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
सुनारको २०० र २०१ को दूरीमा पर्ने १ बिगाह जमिन हाल भारतीय पक्षले खेती लगाउन नदिएर बाँझै राखेको छ । करनसँगै बेलौरी नगरपालिका–१, फटैयाका अर्का स्थानीय मानबहादुर सुनारको समस्या उस्तै छ । उनको पनि नेपाल भारत पिलर नम्बर २०० नजिकै रहेको डेढ बिगाह जमिन भारतीय पक्षको धम्कीका कारण आधा बाँझो र आधा आवादी छ ।
उनीहरु दुवै जना अरुको अधिया बनाएर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘या त सरकारले लालपुर्जा भएको जमीन नेपालको होइन भनोस, होइन भने हाम्रो भूमि फिर्ता होस ।’ नेपाली नागरिकको जमिन बारे स्थानीय प्रशासन अझै सम्म पनि मौन बसेको छ । विस २०६७ सालमा संसदीय समिति र तत्कालिन कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धीबहादुर खड्काको नेतृत्वमा आएको टोलीले पीडित नेपालीहरुको लालपूर्जाको प्रतिलिपी पनि लगेर गएको थियो । तर, त्यसपछि भने सरकारी टोली पनि उक्त क्षेत्रमा पुगेको छैन ।
शहीदको अपमान भयो भन्दै आफन्तबाट शब बुझ्न अस्वीकार
आजको छापाको फ्रन्टपेजः निर्वाचन आयोगको व्यस्ततादेखि शहीद गोविन्द गौतमको अन्त्येष्टिसम्म
अत्तरियामा धारिलो हतियार प्रहार गरी एक युवकको हत्या
खप्तड गोल्डकपको उपाधि नेपाल पुलिसको पोल्टामा, थ्री स्टार १–० ले स्तब्ध
पुनर्वासका अमन कुवँरको पहिलो म्युजिक भिडियो युटुवमा सार्वजनिक
धनगढीमा आफ्नै सहकर्मीको अपहरण गरि कुटपिट गर्ने पक्राउ
तीन दिने प्रथम बेलाैरी माघी मेला सम्पन्न
मोटरसाइकल र हाइस एकआपसमा ठोक्किदा एक जनाको मृत्यु
Hello Punarwas	 २९ पुष २०७५, आईतवार २१:४६
दैनिक राशिफल – Daily Horoscope
२९ पुष २०७५, आईतवार १६:२३
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ निर्वाचनः यि हुन निर्वाचित सदस्य (मत परिणाम…
२९ पुष २०७५, आईतवार १५:५५
नागरिक सहकारीको नवौं साधारण सभा सम्पन्न
२८ पुष २०७५, शनिबार १४:१०
२८ पुष २०७५, शनिबार १४:०८
श्रीमानकाे बन्चराे प्रहारबाट श्रीमतीकाे दुईअाेटै खुट्टा भाँचियाे
२६ पुष २०७५, बिहीबार १५:४१
ससुरालीमै गएर ४७ वर्षीय श्रीमानद्वारा २० वर्षीय श्रीमतीमाथि एसिड…
१९ पुष २०७५, बिहीबार १३:२३
रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण ३ बजे, शपथ लगत्तै फेरि थुनामा जाने
१९ पुष २०७५, बिहीबार १३:१५
भारतबाट २ करोड चोरी गरि नेपाली फरार
१६ पुष २०७५, सोमबार १२:३६
ब्राउन सुगर सहित पुनर्वासमा फेरि एक जना पक्राउ
१५ पुष २०७५, आईतवार २२:०४
पात झर्दैमा रुख सुक्दैन,बसन्त ऋतु सगै हरियाली हुन्छ । : महामन्त्री…
१४ पुष २०७५, शनिबार ०९:४२
नेपाल आइडल रवि ओडकी आमाको करेन्ट लागेर मृत्यु
११ पुष २०७५, बुधबार १०:३१
नेपालकै सुदूर बिकट सुदूरपश्चिमको महाकाली अञ्चल, कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी–पूर्बी क्षेत्र>>